Kombucha. Yintoni na kwaye yintoni izibonelelo zesiselo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Yintoni kombucha?
2 Imvelaphi yeti yekombucha
3 Izibonelelo zekombucha
4 Isiseko esikhethiweyo
5 Isixa semihla ngemihla
7 Iresiphi eyenziwe ngokuzenzela kombucha
7.2 Indlela yokulungiselela
Ngaba uke wazibona iimveliso ezichazwe njenge "Kombucha" kwaye awazi ukuba yintoni kanye kanye? Ngokwandayo okuqhelekileyo kwiivenkile zokutya esempilweni, isiselo sisiphumo sokubila kweti (emnyama, eluhlaza, matte okanye hibiscus) kunye nekholoni yebhaktiriya ebizwa ngokuba yiScoby.
Imvelaphi yeti yekombucha
Ekuqaleni bevela e-China, into entsha yadlula eYurophu, eMntla Melika yaze yafika eMzantsi Melika inezibizo ezimbini: kombucha okanye kombutchá.
Iswekile isebenza njengokutya kwebhaktiriya, ibangele ukuba bande kwaye bongeze uphawu lwe-gassing. Kwaye iindidi ezahlukeneyo zeencasa, ezinje ngeziqhamo, iziqholo okanye eyona ncasa iswiti, zenza iibhotile zaduma. Akuzange kuthathe thuba lide ukuba bathathe indawo yeziselo ezinxilisayo, iijusi ezinamashishini kunye notywala.
Kuba yonke into yenziwe ngezithako zendalo, isoda inikezela ngeempawu zeprobiotic, ezifanayo nezo zifumaneka kwiyogathi kunye ne-kefir, enceda ukusebenza kwamathumbu. Ikwacebile ngeevithamini kunye nezakha mzimba, kwaye ikwanee enzymes ezinceda ekucoleni ukutya.
Enye yeeflegi eziphambili ze-kombucha kukuba i-glycuronic acid iqulethe inceda ukukhupha umzimba kunye nokuphelisa i-toxins. Ukongeza, iti iyanceda ngokusebenza kwamathumbu, ukufunxeka kwezondlo, ukwanda komzimba, ukomelela komzimba kunye nokunganyamezelani kokutya.
Iiprobiotic zinokukhuthaza imveliso ye-leptin kunye ne-insulin, iihormoni ezinxulumene nokuhlutha. Ke ngoko, awunakuva ulambile kakhulu kwaye unciphise ukutya ngokwemvelo. Amathumbu lelinye inqaku elibalulekileyo, ibhalansi yebhaktiriya kwingingqi, ukusebenza ngokukuko kunye nokufunxwa kwezakha mzimba ngexesha lokutya kunceda umzimba ngakumbi.
Ulusu luthanda ukondleka ngakumbi ngokunyuka kokungena kwamanzi, kwaye imeko inokuphucula kunye neevithamini ezifakwe kakuhle.
Kuxhomekeka kwitie ekhethwe njengesiseko, i-kombucha inokuba nezenzo ezahlukeneyo. Bachaza incasa kunye nombala, iasidi, amandla kunye nobumnandi besiselo. Okumhlophe kunye nokuluhlaza kusebenza njenge-antioxidants, banesakhono esikhulu sokulwa nee-radicals zasimahla. Ukukhetha nge-caffeine, iti emnyama okanye eluhlaza, yiza nezinto ezilungileyo kunye nokukhangela amandla. I-Hibiscus kunye ne-fennel nazo ziyavela kwizikhokelo.
Iswekile isebenza njengokutya kweentsholongwane. I-White, organic, demerara okanye i-crystal inokusetyenziswa njenge-fermenter. Ukukhumbula ukuba into yendalo igcina iipropathi zayo kwaye isixa sokugqibela semveliso sixhomekeke kwixesha lokuvumba.
Utywala sesinye isiphumo sokubila, kuba igwele lisitya iswekile kwaye livelisa ikhabhon diokside ebangela ukuba ulwelo luphume.
Isixa semihla ngemihla
Abanye abantu badla i-kombucha nje ukubuyisela iziyobisi, abanye bafuna izibonelelo zeprobiotic. Okubonisiweyo kukutya kokuqala kwe-150 ml ngosuku. Kuyimfuneko ukuba ukulandela ukungaphatheki kunokwenzeka kunye nokusebenza emathunjini, ukuba ulwamkelo lulungile, imali ingafikelela ku-600 ml.
I-Kombucha inokubangela iingxaki zerhasi, imvakalelo yokugcwala, okanye amathumbu avulekileyo kwabanye abantu. Ukuphazamiseka kokugaya kunokwenzeka ngenxa yokuba sisiselo esineasidi, oko kukuthi, kungcono ukusela kancinci kwimeko yesisu okanye reflux, umzekelo.
Ukuba ivelisiwe kwaye ingeniswe ngokuchanekileyo, ayonakalisi umzimba. Kodwa ukulungiswa okungalunganga okanye ukugcinwa kunokubangela iimpendulo ezimbi. Khumbula ukuba kombucha ayililo iyeza, kodwa kukutya okusebenzayo.
Iresiphi eyenziwe ngokuzenzela kombucha
1 IKombucha colony kunye ne-100 ml yolwelo oluhlala kunye nekholoni, ekwabizwa ngokuba njengesiqalo
Ilitha enye yeti eswiti (iqabane, iti emnyama, iti eluhlaza ...), iswiti ngexabiso oza kulisela.
1 imbiza yelitha enye ubuncinci ukubila, ngokukhethekileyo ngomlomo obanzi phakathi kwesandla esinye
Ibhotile yeplastiki e-1 ubuncinci ilitha yokugcwalisa
Izinongo okanye iziqhamo ukunambitha
Hlanganisa iti enencasa kubushushu begumbi kunye ne-cologne kunye ne-starter.
Gubungela imbiza ngendwangu kunye ne-elastic kwaye uyishiye kubushushu begumbi ukuthintela ilanga ngqo.
Ngcamla iti rhoqo emva kweentsuku ezimbini ngecephe ukuhamba notshintsho. Kuxhomekeke kubushushu, kungathatha iintsuku ezintlanu ukuya kwezili-2 ukuba kubekho utshintsho olukhulu kwincasa, ekufanele ukuba ibe mnandi kakhulu kunasekuqaleni kwaye ingabi njenge-acetic (iviniga incasa).
Emva kwexesha lokuvumba lokuqala, khupha i-90% yolwelo kwibhotile yeplastiki kunye nencasa neziqholo: ii-clove, isinamon, iimbotyi zekofu, icardamom okanye iziqhamo: iziqwenga okanye ubuninzi be-100ml yesiselo seziqhamo (i-10% yekombucha ilungile) .
Yivale ngokuqinileyo ibhotile kwaye uqiniseke ukuba akukho kuvuza kwaye uyishiye ngaphandle kwefriji ide ibhotile ithathe uxinzelelo ngokwendalo (uya kuyiva iyikhama ibhotile). Xa unoxinzelelo, yifake efrijini uze usele iayisi khrimu. Yisebenzise ukuyokufika kwiintsuku ezili-10, inde kunokuba incasa inokutshintshwa. Nge-scoby kunye nolwelo olusele embizeni, yongeza iti kwaye uqalise inkqubo kwakhona. Ukuba awuyi kwenza enye i-kombucha, yongeza enye i-500 ml yeti kwaye uyishiye kwindawo epholileyo ukuya kwiinyanga ezi-2. Ukuba nangaliphi na ithuba incasa yeti iba yi-acetic kakhulu (iviniga incasa), lahla i-90% yeti kwaye uqalise ukuyivumela ukuba ibile ixesha elincinci.